एकल ट्रेकर ! – Kanak Mani Dixit
हिमाल खबरपत्रिका (३ कात्तिक २०७० ) बाट
न अध्यात्ममा विश्वास गर्छु म, न ‘रिलिजन’ अर्थ लाग्ने आजभोलिको धर्ममा, जबकि आस्थावान सबैको स्वभावतः कदर गर्छु नै । धेरैले खुशी खोज्दछन् अलौकिक शक्तिको आशा, पहिचान या ‘निकटस्थता’ मा तर ‘नन–बिलिभर’ को लागि त्यो बाटो बन्दछ । ‘¥याशनलिजम्’ ले कतै छहारी दिंदैन, न मन्दिरमा, न ध्यान केन्द्र, प्रवचन वा शक्तिपीठमा । पूर्वजन्म र पुनर्जन्ममा विश्वास नगर्नेले परिवार, साथीभाइ, प्रकृति तथा आफ्नै मनमस्तिष्कमाझ् खुशी खोज्नुपर्ने छ ।
मैले पैदल यात्रा शुरू गरेको कक्षा ९ मा पढ्दा हो । त्यस वेला काठमाडौं उपत्यकाको कुनाकाप्चा एक्लै हिंडेर रोमाञ्चक सफर (एड्भेन्चर) को स्वाद लिएँ । सन् १९७१ मा १६ वर्षको उमेरमा स्कूले पढाइ सकेर एक्कासि सोलुखुम्बू पुगें, जहाँ भर्खर ट्रेकिङ पर्यटनको शुरुआत हुँदैथियो । त्यो पदयात्रामा सोलुको दौरा–सुरुवालमा सुसज्जित शेर्पा दाइले सास नियन्त्रण गरेर उकालो लाग्ने र छरितो गरी ओरालो झ्र्ने ‘विज्ञान’ सिकाइदिए, र म पूरै हिमाल–पहाड–तराई चिर्न सफल भएँ । माथि तेङ्गबोचे गुम्बाबाट खुन्दे–खुमजुङ–नाम्चे हुँदै लुक्ला–चौरीखर्क, खार्ताको उकालो÷ओरालो, टाकशिन्दु, सल्लेरी र ओखलढुंगा, टोक्सेलघाट, कटारी हुँदै पुरानो गोदार निस्किएँ म ।
पदयात्राले मलाई फोटोग्राफर, पत्रकार बनायो । र, शायद सबभन्दा महŒवपूर्ण कुरा दिमागलाई (मैले जानेसम्म, शायद !) सिर्जनशील बनायो । यो कसरी ?
या ‘लिने गर्थें’ ! १२ वर्षअघि ‘राउण्ड अन्नपूर्ण’ ट्रेकबाट मनाङ–लमजुङको बाटो झ्र्ने क्रममा म दुर्घटनामा परें । अझ् भनौं मैले दुर्घटना निम्त्याएँ (दुर्घटनालाई के दोष दिनु !) । स्याँगेको झेलुङ्गे पुलबाट मस्र्याङ्दी तरेर भिरालो बाटो बाहुन डाँडातर्फ जाँदैथिएँ । बर्खाको समय, चिप्लो बाटो, हतारे बानी, दिमाग शायद अर्कै ग्रहमा सफर गर्दै थियो— भीरबाट खसिहालियो । तीन रात लिलीभीरमा अड्केर बसें, तर परिवार, आफन्त, शुभचिन्तक, साथीभाइ तथा त्यहीं भारी बोक्दै आइपुगेका लोकबहादुर लामा र अन्यको सहयोगबाट ‘पुनर्जीवन’ पाएँ ।